Ny mpitantana ny indostrian'ny fitsangatsanganana dia mijanona ho manolo-tena amin'ny tontolo iainana sy ny faharetana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny mpitantana ny indostrian'ny fitsangatsanganana dia mijanona ho manolo-tena amin'ny tontolo iainana sy ny faharetana
Na dia eo aza izany sary mifangaro izany, toa mihevitra ny mpanatanteraka fa ny fitsangatsanganana dia manasongadina ny sehatra hafa amin'ny fampihenana ny entona mandatsa-dranomaso.
Rehefa nihaona tao Glasgow ireo mpitarika eran-tany ho an'ny COP26, fihaonambe isan-taona ataon'ny Firenena Mikambana momba ny fiovan'ny toetr'andro, ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'ny WTM London, dia nanamafy fa ireo mpanatanteraka ambony amin'ny indostrian'ny fizahantany dia mijanona ho manolo-tena amin'ny tontolo iainana sy ny faharetana.
Ny fandaharam-potoan'ny COP26 amin'ity taona ity dia hametraka tanjona fampihenana ho an'ny 2030 izay hanohana ny fanatrarana ny famoahana karbônina aotra amin'ny tapaky ny taonjato. Ny firenena sy ny mpiara-miombon'antoka amin'ny sehatra tsy miankina dia hiresaka momba ny fomba hiarovana ny vondrom-piarahamonina sy ny toeram-ponenana voajanahary. Ny WTM London dia lohalaharana amin'ny fizahantany tompon'andraikitra sy maharitra nandritra ny taona maro ary nanana programa natokana ho an'ny fizahantany tompon'andraikitra amin'ny hetsika rehetra nanomboka tamin'ny taona 1994.
Tamin'ity taona ity, ny tatitra momba ny indostrian'ny WTM dia nanontany matihanina efa ho 700 avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, ary koa ireo mpandeha 1000 UK, momba ny fihetsik'izy ireo amin'ny faharetana sy ny halehiben'ny anjarany amin'ny fizotran'ny fanapahan-kevitra.
Ny valin-kafatra avy amin'ny matihanina dia manoro hevitra fa ny indostrian'ny fitsangatsanganana dia mandray ny andraikiny, tsy amin'ny tontolo voajanahary ihany fa amin'ny sivilizasiona olombelona. Maherin'ny iray amin'ny efatra (27%) no nilaza fa ny faharetana no laharam-pahamehana voalohany, ary ny 43% fanampiny dia nilaza fa ao anatin'ny telo voalohany.
Manodidina ny iray amin'ny dimy (22%) no mahafantatra ny maha zava-dehibe ny faharetana saingy tsy mametraka azy ao anatin'ny telo voalohany. Latsaky ny iray amin'ny folo (7%) no niaiky fa tsy ao anatin'ny eritreriny ara-barotra izany amin'izao fotoana izao.
Nanambara ihany koa ireo tompon'andraikitra ambony amin'ny indostria fa ny areti-mifindra dia nahatonga ny faharetan'ny fandaharam-potoana. Saika ny enina amin'ny folo (59%) no nilaza fa ny faharetana no laharam-pahamehana voalohany nandritra ny areti-mifindra, ary ny iray amin'ny efatra fanampiny dia nanampy fa io no laharam-pahamehana voalohany talohan'ny fipoahana ary nijanona ho toy izany.
Nandritra ny taona maro ny WTM London sy ireo mpiara-miombon'antoka ara-pizahantany tompon'andraikitra dia nandray anjara tamin'ny fiantohana fa ny resaka momba ny fizahan-tany maharitra sy tompon'andraikitra dia miitatra mihoatra ny vonjy taitra amin'ny toetr'andro ary ahitana fahafahana mitovy amin'ny toeram-piasana, karama sy fepetra mendrika, fahasalamana, fanabeazana, fanomezana hery ny zazavavy, mihena. ny tsy fitoviana sy ny maro hafa.
Ohatra, nanangana ny Just a Drop tamin'ny 1998 ny WTM, fikambanana mpanao asa soa natokana hitondra rano fisotro madio sy fidiovana ho an'ireo vondrom-piarahamonina sahirana ary nanampy olona efa ho roa tapitrisa maneran-tany.
Na izany aza, ny fiantraikan'ny fitsangatsanganana amin'ny planeta dia matetika voaforona manodidina ny entona entona mandatsa-dranomaso avy amin'ny fiaramanidina. Ny fanodinkodinana karbônina dia fomba iray natao hamahana izany - ny mpandeha sy ny mpamatsy dia manana fahafahana hanome vola ho an'ireo fikambanana handany ny vola amin'ny tetikasa izay hanonerana ny entona amin'ny sidina. Na izany aza, ny fanonerana ny karbônina dia tsy hoe tsy misy mpitsikera azy sy ireo mpandeha, ary koa ireo mpanentana momba ny tontolo iainana sasany, mbola resy lahatra.
Ny valinteny avy amin'ny mpandeha britanika maherin'ny 1,000 ho an'ny WTM Industry Report dia nanambara fa ny efatra amin'ny folo dia milaza fa nampiasa fanonerana karbônina - 8% no nilaza fa nanonitra ny sidina rehetra izy ireo tamin'ny 15% manao izany matetika, 16% amin'ny fotoana sasany. Miaraka amin'ny iray amin'ny telo mandà mavitrika hanonitra ny sidina rehefa nomena fahafahana hanao izany, ny vokatra azo dia tsara kely ho an'ny fanonerana.
Na izany aza, namaly ny 24% ambiny fa tsy hain'izy ireo akory ny dikan'ny fanonerana karbônina, ka nanoro hevitra fa ny orinasa tsirairay sy ny indostrian'ny fitsangatsanganana midadasika kokoa dia mila mampita mazava kokoa ny teoria sy ny fampiharana ny fanonerana karbônina. Manana anjara amin'ny fandraisana anjara amin'ny mpandeha ihany koa ny zotram-piaramanidina, ny mpanangom-bokatra, ny mpandraharaha an-tserasera ary ny antsinjarany.
Eo amin'ny sehatry ny orinasa dia misy ihany koa ireo mpanatanteraka izay nanambara ny tsy fahampian'ny fahatsiarovan-tena mifandraika amin'ny faharetana. Orinasa maro avy amin'ny indostria isan-karazany no nanao sonia ny fampielezan-kevitry ny Firenena Mikambana momba ny hazakazaka mankany amin'ny aotra, manolo-tena amin'ny famoahana karbônina aotra amin'ny taona 2050 farafahatarany.
Hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny Tondrozotra Net Zero amin'ny COP26 ny World Travel and Tourism Council. Ity tondrozotra ho an'ny indostria ity, izay natomboka tamin'ny volana septambra lasa teo, dia hampiditra rafitra manokana ho an'ny faritra manokana amin'ny tontolo iainana fitsangatsanganana sy fizahan-tany, mba hanafainganana ny fanoloran-tenany amin'ny toetr'andro sy ny fandaharam-potoana fampihenana ny entona.
Saingy rehefa nanontany ny matihanina ny WTM London raha manana paikadin'ny "fampihenana karbôna" ara-dalàna ny orinasany manokana, mihoatra ny iray amin'ny efatra (26%) no tsy afaka nilaza raha misy ny politika toy izany. Maherin'ny iray amin'ny telo (37%) no nilaza fa tsy nisy ny politika napetraka.
Ny 36% ambiny dia niaiky fa nisy ny politika napetraka, saingy ny 26% ihany no tena nampihatra ny politika. Niaiky ireo mpiasan'ny fitsangatsanganana iray amin'ny folo fa manana politika fampihenana karbônina ny mpampiasa azy, izay tsy nampihariny.
Na dia eo aza io sary mifangaroharo io, toa mihevitra ny mpanatanteraka fa ny fitsangatsanganana dia mihoatra ny sehatra hafa amin'ny fampihenana ny entona entona mandatsa-dranomaso. Saika ny 40% no nilaza fa mandeha tsara kokoa noho ny sehatra hafa ny fitsangatsanganana ka ny 21% ihany no mieritreritra ny mifanohitra amin'izany. Manodidina ny iray amin'ny efatra (23%) no mahita ny ezaka ataon'ny dia ho azo ampitahaina amin'ny sehatra hafa, ary ny 18% amin'ny santionany dia tsy mahafantatra ny fandehan'ny dia.
Simon Press, Talen'ny Fampirantiana, WTM London, dia nilaza hoe: “Na dia mirehareha amin'ny ezaka naharitra am-polony taona maro nataon'ny WTM hitarika ny adihevitra momba ny fizahan-tany maharitra sy tompon'andraikitra aza izahay, dia tsy mionona izahay. Asehon'ireo valim-pikarohana ireo fa mbola manana fomba ahafahantsika miditra tanteraka amin'ny indostria miaraka amin'ny vina ho an'ny ho avy fizahan-tany maharitra sy tompon'andraikitra isika.
“Raha misy, mila miantsoantso mafy kokoa isika. Tsy mandeha ny hamehana ara-tontolo iainana ary tena ilaina ny fampitsaharana ny fiakaran'ny planeta. Saingy ny indostrian'ny fitsangatsanganana dia mila mavitrika amin'ny fampiroboroboana ny fahasamihafana, ny fampidirana ary ny tombontsoa ara-toekarena raha tiantsika ny vahoaka, ny governemanta ary ny mpandrindra hahita ny fitsangatsanganana sy ny fizahan-tany ho hery ho an'ny tsara, fa tsy zavatra hokendrena sy hetra.